မယ်ဟောင်ဆောင် တမ်းချင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
မယ်ဟောင်ဆောင် တမ်းချင်း	Posted by mm thinker on August 16, 2008
Posted in: Poem.	Tagged: Poem.	Leaveacomment
အငြိမ်းစားတစ်ယောက်နဲ့ တူတဲ့မြို့ဆိုရင်အဲဒါ မယ်ဟောင်ဆန်ဖြစ်မယ်သူ့တစ်ကိုယ်တော် ငြိမ်ချမ်းမှုနဲ့ တိတ်ဆိတ်လို့။
စကတ်ဝတ် ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဝေးဝေးနေနေသေးတဲ့ မြို့သနပ်ခါးလား၊ မျက်နှာချေလားတစ်ကွက်တစ်ကွက်ကြားတော့ တွေ့သေးတယ်။
ဆေးပေါ့လိပ်၊ ဦးစိုင်းလိမ်းဆေးနဲ့ကွမ်းယာငုံနေသေးတဲ့ မြို့။
ကယားငွေတောင်ပြည်နဲ့ ကျောချင်းကပ်တောင်ကြောတွေကြားမှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့မြို့…ရန်ကုန်စတိုင်လ်ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာလို့ရတဲ့မြို့…ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေ မြေငှားဖြစ်ရတဲ့မြို့…သစ်သီးဝလံတွေ တပုံတခေါင်းအိတ်ဖောင်းနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတချို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးမြို့တဲ့ပိန်လိန်ကြုံလှီနေတဲ့သူ မရှိဘူးမျှစ်ခူးဖို့ ခြံစပ်မှာရှိတယ်။
လည်ပင်းရှည်ကယန်းတွေနဲ့ တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ မြို့…တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်သိနေတဲ့မြို့…မြန်မာပြည်ကို လွမ်းဖို့ပြဿဒ်ကနုတ်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကြိုကြားကြိုကြား မြန်မာ စာအံသံနဲ့ရန်ကုန်ကို လူနာမေးတဲ့ သူတွေရှိတဲ့ မြို့။
တိမ်ဖုံး၊ မိုးရွာ၊ နေသာ လေပြည်တိုးအိပ်ရေးနိုးဖို့ခက်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ ထောင့်တစ်ထောင့်မှာဇာတ်ကြောင်းပြန်စရာတွေရှိတဲ့ မြို့ဟာဒါ မယ်ဟောင်ဆောင်။
ကေအမ်ကေဇက်၃၀၊ ၆၊ ၂၀၀၈မယ်ဟောင်ဆောင်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဖျား။
(ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၄ တွင်ဖော်ပြပြီး။)
← ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်မှ ကာတွန်းအချို့	ဖိုးဝမှာ လက်သွေးကြဖို့ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...